Ukulandelela Amakholi Wefoni kusuka ku-Organic and Paid Search | Martech Zone
Ukulandelela Amakholi Wefoni kusuka ku-Organic and Paid Search
NgoLwesine, Juni 8, 2017 NgoLwesithathu, Juni 7, 2017 Douglas Karr
Sineklayenti elithanda ukushayela okuningi izingcingo kubhizinisi labo kunanoma iyiphi enye indlela. Njengeklayenti labo, sifuna ukuqinisekisa ukuthi amasu ethu asebenza kahle, ngakho-ke sidinga ukufaka amaqhinga athile wokuqonda ukuthi izingcingo zivelaphi.
Iklayenti lifake I-HostedNumbers emikhankasweni edlule futhi, ngemuva kokuchitha imizuzu embalwa endaweni yesikhulumi siyazi ukuthi izokwazi ukwamukela izidingo zethu!
Ukulandelela Izingcingo Zocingo Lokucinga Olukhokhelwayo
Ukulandelela izingcingo zokucinga ezikhokhelwayo kulula kakhulu ngoba ungashicilela noma iyiphi inombolo yocingo ongayithanda. Faka inombolo yocingo nge-HostedNumbers futhi usukulungele ukuhamba… noma ingabe usukulungele? Ngaphakathi kwe-HostedNumbers, banikela ngocingo oluqinile analytics ukukwazisa ukuthi izingcingo ezingenayo zivelaphi.
I-HostedNumbers iphinde inikeze ukuhlanganiswa kweGoogle Analytics okuhle impela. Vele uye kuzinsizakalo> Izinketho zokumisa bese uthola Ukuhlanganiswa Kwewebhu.
Ngaphakathi Ukuhlanganiswa Kwewebhu, sikwazile ukusetha i-URL eguquguqukayo ekhasini esivimbe izinjini zokusesha ukuthi zingahambi. Amandla akuvumela ukuthi usebenzise izintambo eziguqukayo ezingashintshwa ngakho sakha i-URL yomkhankaso ezobamba umthombo njengosesho, okuphakathi njengocingo, bese umkhankaso njengenombolo yocingo ushayele.
Manje sizokwazi ukulandelela amakholi okusesha akhokhelwayo ngaphakathi kwe-Google Analytics. Futhi, sizolandela kakhulu ukulandela umkhondo wokusetha leli khasi langaphakathi elihlukile futhi mhlawumbe nedeshibhodi ehlola izingcingo.
Ukulandelelwa kwe-Organic Search Phone Izingcingo
Sisebenzisa i-HostedNumbers, singangeza inombolo yocingo yokusesha okuphilayo bese siyilandelela ngaphakathi kwe-Google Analytics sisebenzisa ikhodi engenhla. Kodwa-ke, ukulandela usesho lwe-organic kunzima kakhulu ngoba sidinga ukwenza ukushintshaniswa kwezinombolo zefoni uma umsebenzisi engena kusayithi evela enjini yokusesha.
Ukwenza lokhu, sikwenze lokhu ngokushicilela i- inombolo yocingo exhunywe kusayithi ngaphakathi kwamathegi we-span nesigaba esithile:
Sishayele Manje: (19876543210) 987-654
Futhi ngaphakathi konyaweni lwekhasi ngaphambi kwethegi yomzimba wokuphela, silayisha i-jQuery ekhomba isikhombisi bese iguqula inombolo yocingo uma kuyinjini yokusesha ethumela ithrafikhi:
Manje, uma umuntu ovela kusesho lwezinto eziphilayo echofoza emphumeleni bese efika kunoma yiliphi ikhasi ngaphakathi kwesayithi, kuzokhonjiswa inombolo yocingo yomkhankaso. Lapho isivakashi sishayela leyo nombolo yocingo, i-Google Analytics izoyithatha ngaphakathi komkhankaso!
Tags: Ama-Analyticsukulandelela ikholiI-google analyticshostnumbersukulandelela ucingoizingcingo zokulandelela
I-Autopilot Iqalisa Imininingwane, iTracker Journey Yekhasimende Yabathengisi
Isebenza kanjani i-OTT Technology nge-TV yakho
Jun 8, 2017 ku-1: 07 PM